ड्रागनफलको खेती कौसीमा पनि यसरी गर्न सकिन्छ !
HomeMOTIVATIONALड्रागनफलको खेती कौसीमा पनि यसरी गर्न सकिन्छ !
ड्रागनफलको खेती सानो अर्थात एक स्क्वायर/ फुट मात्र जमिनमा पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि पानी नजम्ने र घाम लाग्ने ठाउँ हुनु जरुरी छ । सानो करेसाबारी, घरको कम्पाउण्ड, कौसी र छत, आँगन, पेटी जहाँ गमला राख्न मिल्ने ठाउँ छ त्यहाँ यसको खेती गर्न सकिन्छ ।
माटो, कम्पोष्ट मल र कोकोपिटको मात्रा बराबर मिलाएर राम्ररी फिटी त्यसमा ड्रागनफलको बिरूवा रोप्न सकिन्छ । गमलामा रोप्दा कौसी, छत, भर्‍यङ, पर्खालको डिलमा राम्रो सपोर्ट र रिङमा अडिने गरी राख्नुपर्दछ । गमलाको आकार २०-२३ इन्च गहिराइ र २५-३० ग्यालन हनुपर्छ ।
माटो सुकेपछि मात्र पानी दिनुपर्छ र रोपिएको भाँडोमा पानी जाने प्वाल मज्जाको हुनुपर्छ ।महिनाको एक पटक बराबर मात्रामा रासायनिक मल दिनुपर्छ । जाडो मौसममा भने चिस्यान कायम गर्न कम्पोष्ट मल प्रयोग गर्दा हुन्छ ।
लाही कीरा तथा अन्य रोग, किराहरुको आवलोकन गर्नुपर्छ र नीम आयल छरिरहनु पर्दछ । यसरी छतमा रोप्दा प्रतिगमला २० देखि ५० केजीसम्म फल्ने गरेको पाइएको छ ।